mheni inosunga zvishongedzo Vagadziri & Vatengesi | China mheni inosunga accessories Fekitori
Kumusoro muChiratidzo Chekutadza
General: SJWL-SGFI / II chiratidzo chechipiri-mu-chimwe chakapfupikiswa kubazi rekuparadzira redunhu bazi rakawanda rekutadza kuwana mhedzisiro isimba remagetsi rekuchengetedza vashandi vemusoro chinhu chekuwana mhosva yepasi dzimwe nguva hafu yezuva, vamwe kubva mangwanani kuwana manheru, Inner Mongolia inofanirwa kuwana mazuva mashoma. Naizvozvo, kumisikidzwa kwezviratidzo zvekukanganisa kunogona kuvandudza zvakanyanya kuvimbika kwesimba remagetsi, kudzikisira kusimba kwevashandi, kupfupisa iyo magetsi kupera nguva. Chigadzirwa Zvimiro: Sho ...
Panel Rudzi Mhaka chakarurama
General: Iyo pfupi-redunhu yazvino sensor uye yepasi sensor yazvino zvakabatana zvakabatana nepaneru chiridzwa chikuru muviri kuburikidza neiyo fiber fiber. Mushure mekundikana. iyo sensor inotumira iyo chiratidzo kune iyo mainframe inomiririra inomiririra kuburikidza neiyo fiber fiber kutonga. Kumisikidza Position: • Yakaiswa panzvimbo yekutanga yekutsiva yeiyo refu tambo tambo): inogona kutongwa kuti pane kukanganisa mune chiteshi kana kunze kwetambo; Yakaiswa mumushandisi kupinda mushanduri i ...
monitor yemheni inosunga
Monitorer inosunga inoshandiswa kurekodha inosunga chiitiko nhamba uye leakage yazvino.
Kunze Kwemheni Counter Mheni Counter
Iyo Surge Counter yakabatana pasi peiye anosungwa mune serial, iyo inoshandiswa kurekodha nguva dzekushanda dzehusungwa. JS-8 mhando yakabatana ne6KV -220KV inosunga. Mamiriro ezvinhu enharaunda achasangana nezvinodiwa neanosunga, semuenzaniso, kukwira kwacho hakupfuure 4000m, tembiricha yemamiriro ekunze iri -40 Centigrade, iyo pakaunda haigone kuiswa munzvimbo iyo inosanganisira gasi rinokanganisa simbi uye zvikamu zvekudzivirira, zvakakomba kusvibiswa uye kwakanyanya vibration. Kuverengera Kuverengera ...